သငျသညျအခြို့သောညစ်ညမ်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိပ်ခန်းလိင်ဘဝတက်မြိန်ဖို့ညစဉ်ညတိုင်းကြိုးစားနေကြသူစုံတွဲများ၏သန်းပေါင်းများစွာ၏တဦးတည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်,ထို့နောက်သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်စနစ်တကျပြုသောအမှုဖွင့်ပုံကိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်အိပ်ခန်းထဲမှာအမှုအရာတက်မြိန်ဖို့ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်မလိုအပ်ပါဘူး။ ႐ုပ္႐ွင္ေတြ ႐ိုက္ကူးေနတဲ့ဇာတ္ကားေတြ၊႐ုပ္႐ွင္ေတြ၊႐ုပ္႐ွင္ေတြနဲ႔႐ုပ္႐ွင္ေတြကိုရီစရာႀကီးလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါကသင့်လက်တွဲဖော်အတွက်မလုံခြုံမှုကိုသွေးဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်စိတ်နေစိတ်ထားကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။, သင်သည်အဘယ်သို့အစားလိုအပ်ပါတယ်စုံတွဲလိင်ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုဖြစ်ပါသည်,မည်သူမဆိုအပေါ်မလုံခြုံမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်သူကအပြန်အလှန်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လာမယ့်. သငျသညျညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မယ့်အစားသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဂိမ်းကစားရန်ရွေးချယ်သည့်အခါသို့သော်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအားသာချက်များရှိပါတယ်။ ဒီစုဆောင်းမှုအထူးသဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံး၏အရသာအပေါ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကကျနော်တို့ပျော်မွေ့သောညစ်ညမ်းမျိုးမှကြွလာသောအခါလိင်အကြားကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမျိုးသားရော၊အမျိုးသမီးရောနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အသုံးတည့်တဲ့မျိုးဥတွေလည်းရှိတာကြောင့်ဘယ်သူကမှပိတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။, သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူကြိုးစားချင်ကြောင်းတစ်ကီလို၏စိတ်ကူးအတွက်ဖြေလျှော့ဘို့ဤဂိမ်းအချို့ကိုသုံးနိုင်သည်,သို့မဟုတ်သင်ပင်ပိုကောင်းအတူတကွလုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်လိုများအတွက်သင်ခန်းစာများအဖြစ်သူတို့ထဲကအချို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောစုဆောင်းမှုသည်အခမဲ့ဂိမ်းများနှင့်သာလာသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုပေးဆောင်အောင်ကြသည်မဟုတ်;ကျနော်တို့မဆိုအလှူငွေမတောင်းပါလိမ့်မယ်နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့ရုံသငျသညျနှစ်ဦးစလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ကြောင်းကတိပေးသငျသညျနှစျဦးလိုအပ်ပြီးတော့အားလုံးဤဂိမ်းဥစ္စာဖြစ်လိမ့်မည်။ စူးစမ်းပါ!
ဝင်ခွင့်အဆင့်စုံတွဲများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဂိမ်းများကိုအကြံပြုပါသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားစရာပုံပြင်များ,ကွဲကွဲပြားပြားဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လာမယ့်နေကြသည်,သူ့ကိုနှင့်သူမ၏နှစ်ဦးစလုံးပျော်မွေ့စေခြင်းငှါပင်အချို့သောရုပ်ပြောင်ဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍သင်သည်နှစ်ခုလုံးသောပရိသတ်များဖြစ်ပါကသင်သည်စုံတွဲများအတွက်လိင်ဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်၊သင်နှစ်သက်သောကာတွန်းဇာတ်ကောင်များနှင့်လိင်အရေးယူမှုကိုခံစားနိုင်လိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်,သင်မှန်မှန်ရှိသင့်ကြောင်းလိင်အကြောင်းဆွေးနွေးမှု၌မျိုးကိုဆောင်ကြဉ်းရန်ဤဂိမ်းအချို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဘယ်အရာကိုယောက်ျားသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကစားပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စအိုလိင်ဂိမ်း,ဒါပေမယ့်လည်းသုံးပုံသုံးပုံညစ်ညမ်းဂိမ်း,မီလီမီတာနှင့်ဖေး,နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်,မင်းသမီးပိုပြီးလျင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီစီဂိမ်းအပေါ်ကစားခလုတ်ကိုထိလိမ့်မည်နှင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စီအီးအို။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့စနစ်တကျအချို့အမျိုးထွက်သယ်ဆောင်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပေးပါလိမ့်မယ်သောသင်ခန်းစာလိင်ဂိမ်းရှိသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျသခင်၏သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်သင့်ရဲ့ကျွန်လေ့ကျင့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်သည့်အနေဖြင့်ခကျြခကျြမြားရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းစအိုကစားအမျိုးမျိုးကိုခံစားဖို့ဘယ်လိုပေါ်ဂိမ်းရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းအခန်းကဏ္ဍလိင်ဂိမ်းသင်ခန်းစာများ,ယုံကြည်ရနှင့်သင်ရယ်မောသို့မဟုတ်ကုရ်အာန်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကစားအစည်းအဝေးများတင်ဆောင်လာသော၌သင်တို့ကိုအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်အရာ.
အခါကြှနျုပျတို့သညျဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုပူဇော်ရာအပေါ်ဆိုက်မှကြွလာ,အရာအားလုံးနှစ်ခုဆိုက်အညွှန်း၏စိတ်ကူးန်းကျင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကျနော်တို့အများဆုံးစုံတွဲများအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းခံစားမှကြွလာသောအခါအိပ်ရာသူတို့ရဲ့တက်ဘလက်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းငါသိ၏။ ဒါကြောင့်,ငါတို့သည်ဤစုဆောင်းမှု၌ရှိသမျှသောဂိမ်းငါနှင့်အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြသည်သေချာပါစေ. ငါတို့သည်လည်းစုဆောင်းခြင်းကောင်းစွာစနစ်တကျကြောင်းသေချာပါစေ,ယောက်ျားအဘို့သို့မဟုတ်မိန်းမတို့အဘို့ဂိမ်းတစ်ခုစီ. ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့အရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်၊အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးသောနည်းဖြင့်ဖြစ်သည်။